Bora Bora, paradaịs mara mma na French Polynesia | Akụkọ Njem
Bora Bora, paradaịs mara mma na French Polynesia
Susana Garcia | | Getaways, General, Ihunanya
Bora Bora abụrụla otu ebe kachasị mma ma a bịa na ịnụ ụtọ ezumike nke ezumike nke ezumike na ezumike na a osisi ebe. Ekwesịrị ikwu na ọ bụ ebe okomoko, mana n'ezie ọ bụ ebe kachasị mma maka ezumike pụrụ iche, na ọdọ mmiri doro anya na-anọ n'ime ụlọ nwere ụdị nkasi obi niile.
Bora Bora dị na French Polynesia, ma ọ bụghị ebe mmadụ jupụtara, n'ọtụtụ akụkụ n'ihi obere agwaetiti ahụ dị na n'ihi na ọ bụghị akụ na ụba niile ga-akwụli ya. E nwere nnukwu agwaetiti ma nwee 'motus' ma ọ bụ obere agwaetiti dị iche iche nke na-enweghị usoro ugwu, na-abụkarị obere ahịhịa. Ọ bụghị naanị anyanwụ na ebe njedebe osimiri, kamakwa ọ bụ ebe ịchọpụta ọdịnala oge ochie pụrụ iche.
1 Obere akụkọ banyere Bora Bora
2 Ozi dị mkpa maka ịgagharị
3 Ihe ị ga-ahụ na ime na Bora Bora
Obere akụkọ banyere Bora Bora
Na ụkpụrụ, agwaetiti ọ bụla na Polynesia na-achị onwe ya site n'aka onye isi obodo. N'ihe dị ka 1700 ndị Bekee weghaara ọtụtụ ókèala ahụ, nke diri ruo narị afọ nke XNUMX, mgbe ndị France chụpụrụ ndị Bekee wee nwee ike, bụrụ French Polynesia ugbu a. Taa, ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ mmegharị na-akwado nnwere onwe, iwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eme ka o doo anya na France agaghị enyefe ókèala mba ndị a.
Ozi dị mkpa maka ịgagharị
Bora Bora dị na northwest nke Tahiti, na ndịda Hawaii, ma dịkwa nke ndi oku mebiri emebi mebere nke ahụ anaghịzi arụ ọrụ. A na-agba ya gburugburu ọdọ mmiri nke coral reef kewara site n'oké osimiri, nke mere ka ọ bụrụ ebe dị jụụ ma dịkwa mma iji kwụpụ.
Iji ruo n'àgwàetiti ahụ ọ dị mkpa gafere ọdụ ụgbọ elu Tahiti, na-eji ọrụ nke ụlọ ọrụ Air Tahiti. N'ihe dị ka nkeji 50, ị nwere ike iru ọdụ ụgbọ elu Motu Mate, nke dị na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ. Obere agwaetiti a ma ọ bụ motu dị nkeji iri atọ site na Vaitape, nke bụ isi obodo Bora Bora. Site na ọdụ ụgbọ elu ị ga-ebu ụgbọ mmiri iji rute ebe dị iche iche, ihe kachasị mma bụ iji kwenye ịfefe na họtel. Enweghị ụgbọ njem ọha na agwaetiti ahụ, yabụ na ị ga-agbazite ụgbọ ala, gaa na safaris jeep ma ọ bụ jiri ịnyịnya ma ọ bụ ịnyịnya na-agagharị, yana ụgbọ mmiri ndị na-esi n'otu motu gaa na nke ọzọ. Zọ ọzọ isi esi ebe ahụ aga njem site na Tahiti bụ site n'iji ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri, ọ bụ ezie na a naghị atụ aro ha nke ukwuu n'ihi na ha na-nwayọ nwayọ ma nwekwaa ihe enyemaka ole na ole.
Akwụkwọ ga-abụ weta paspọtụ ọ bụrụ na anyị ga-erughị ọnwa atọ, na visa ma ọ bụrụ na ọnụnọ ahụ dị ogologo. Ego bụ French Pacific franc, ihe dịkwa ka franc 120 dị ka otu euro. Ọ kachasị mma ịgbanwe ego na agwaetiti ahụ, n'otu ụlọ oriri na ọ ,ụ ATụ, na ATM ma ọ bụ n'ụlọ akụ, na ụfọdụ ebe ha na-anabatakwa euro.
Ihu igwe na-enye 25 ruo 30 ogo niile n'afọ, ma oge kachasị mma bụ site na Mee ruo Ọktọba, ebe ọ bụ na e nwere ọnwa mgbe ikuku na-efesi ike. Ọnwa nke Mee, June, Septemba na Ọktọba bụ nke kachasị mma maka nchikota oge na nhazi nke ebe obibi.
Ihe ị ga-ahụ na ime na Bora Bora
N'ime ụbọchị ndị mbụ, ihe kachasị mma ịme bụ izu ike, ịnụ ụtọ ụlọ ndị mara mma na mmiri na ọdọ mmiri doro anya. Mgbe anyị gbakere site na njem ahụ, anyị nwere ike ịmalite ịnụ ụtọ mmemme ndị ahụ. Jiri ụgbọ epeepe were agagharị agagharịN'ime ụgbọ mmiri na-atọ ọchị, ịhụ ala ala nke ọma, nsị, igwu mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri bụ nnukwu ihe ọzọ. Agwaetiti ahụ pere mpe, nke nwere ihe dịka kilomita 30, nwere nnukwu ọdọ mmiri dị n'ime, nke motus gbara ya gburugburu, otu n'ime ihe kachasị mma bụ Motu Tapu, ị nwekwara ike ịga na agwaetiti ndị dị nso nke Tahaa ma ọ bụ Raia Tea n'ụgbọ mmiri ndị a.
Otu n'ime njem mmụta nke ndị na-akụ mmiri mmiri ekwesịghị ịhapụ bụ gaa na mmiri coral. N'ime ya ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ndụ mmiri n'okpuru mmiri, na-egwu egwuregwu mmiri. Also nwekwara ike ịnụ ụtọ ọdịda anyanwụ site na katamaran.
Y’oburu n’acho ihu umu anumanu mmiri gbara gburugburu, i nwere ike gaa na ogige mmiri ụgbọ mmiri Lagoonarium, n’agwaetiti ndị ọzọ. N'ebe ahụ, a ga-ahụ ha ma enwere ike igwu mmiri na anụmanụ dịka azụ dị egwu, dolphins, ụzarị ma ọ bụ nduru. Na Le Meridien ị nwere ogige ọzọ mmiri nwere ihe karịrị otu narị ụdị turtles ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịma anụmanụ a n'ụzọ miri emi.
una njem maka ugwu Otemanu bụ ihe ọzọ dị mkpa. Ọ bụ ugwu ugwu na-ehi ụra oge ochie malitere ya, ị ga-enwekwa ike ịnụ ụtọ ọdịdị mbara ala karịa mgbe ọ bụla. Enwekwara njem nlegharị anya 4 × 4 n'akụkụ mkpọda ugwu ahụ, ị ​​nwere ike ịrị ugwu, ma ọ bụ gaa njem njem iji hụ foduru nke Agha Warwa nke Abụọ.
Njem a gabu ohere na-enwe osisi gastronomy. Gbalịa jams ejiri mkpụrụ osisi mara mma na nke ọhụrụ, ma ọ bụ nwaa nri efere. A na-enye nri dị iche iche nke French na mba ofesi na mgbakwunye na nri Tahitian. Uru bụ ụdị akwụkwọ nri Polynesia, ị nwekwara ike ịnwale ji, ihe mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ. Banyere ihe ọ drinksụ drinksụ, enwere mmanya na-atọ ụtọ dị ka Banana Coralia, ya na unere ọhụrụ, ihe ọ lemonụ lemonụ lemon, sirop sirop na aki oyibo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Ihunanya » Bora Bora, paradaịs mara mma na French Polynesia
Osimiri kachasị ogologo na Europe